အတွေ့ကြုံရင့်သော အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ?
အခုဆို စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများစုဟာ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့အတူ လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ် နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးဆရာ၊ ဂရပ်ဖစ် ဒီဇိုင်နာ၊ ပရောဂျက် မန်နေဂျာ၊ ပရိုဂရမ်မာ စသဖြင့် အလွတ်တန်းပညာတွေကို မိမိလုပ်ငန်းအတွက် အရင်ကလို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဖွေစရာမလိုတော့ပဲ အလွယ်တကူ ငှားရမ်းသုံးစွဲနိုင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းအများစုဟာ ဘာကြောင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို အသုံးပြုကြသလဲဆိုတော့
- အရေးကြီးဆောင်ရွက်စရာ ရှိတဲ့အခါ လျှင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း
- လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်အရ အချိန်ပြည့်ဝန်ထမ်း ငှားရမ်းစရာမလိုခြင်း
- အရည်အချင်းရှိတဲ့သူတွေကို လွယ်ကူစွာ ငှားရမ်းအသုံးပြုနိုင်ခြင်း နှင့်
- ကုန်ကျစရိတ်တွေကို လျော့ချနိုင်ခြင်း
စတဲ့ အားသာချက်တွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအသုံးပြုကြတဲ့ နေရာမှာ မိမိငှားရမ်းလိုက်သော အလွတ်တန်းပညာရှင်ဟာ မိမိပရောဂျက်နဲ့ ကိုက်ညီဖို့ လိုအပ်သလို ပရောဂျက်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နယ်ပယ်မှာလည်း အတွေ့ကြုံတွေရှိထားဖို့လည်း လိုအပ်လာပြန်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အတွေ့ကြုံရင့်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ ဆိုတဲ့ အချက်လေးတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရည်အချင်းနှင့် အတွေ့အကြုံရင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ Portfolio နဲ့ ပရိုဖိုင် တွေကို သေချာပြင်ဆင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ မိမိအနေနဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင် တစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းတော့မယ် ဆိုလျှင် ၎င်းတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်ကို သေချာလေ့လာပြီးမှသာ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ လေ့လာတဲ့နေရာမှာ အချက်အလက်ပြည့်စုံမှု နှင့် ရေးသားထားသော အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိမရှိကိုလည်း ထပ်မံ စုံစမ်းသင့်ပါတယ်။
မိမိတင်ထားသော အလုပ်ခေါ်စာ အပေါ် တုံ့ပြန်မှုနှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
ဒီအချက်ဟာလည်း အရေးကြီးသော အချက်ထဲမှာပါဝင်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်အလက်များကို သေချာဖတ်ရှုခြင်း မရှိတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ မိမိပရောဂျက်ကိုလည်း အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့ တထစ်ချ ယုံကြည်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ချို့သော အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေက အလုပ်ခေါ်စာကို သေချာမဖတ်တော့ပဲ အသင့်ရေးထားတဲ့ ပရိုပိုဆယ် ကိုပဲ Copy, Paste လုပ်ပြီး အလုပ်လျှောက်တတ်ကြပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကတော့ သင့်အလုပ်နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် သို့မဟုတ် သင့်ပရောဂျက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်မယ့် ဖြေရှင်းချက်တွေကို ရေးသားပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ အရင်ပြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုလည်း လင့်ခ်အဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဓါတ်ပုံအဖြစ်သော်လည်းကောင်း၊ ဗီဒီယိုအဖြစ်သော်လည်းကောင်း ကိုးကားချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းဖြည့်စွက် လျှောက်ထားတတ်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရ အဆင်ပြေမှု ရှိ/မရှိ နှင့် ရွေးချယ်ခြင်း
အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု ရှိခြင်း၊ မရှိခြင်းကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေက အဝေးကနေ မိမိလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲနေလျှင် မိမိလုပ်ငန်းအတွက် နှောက်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သာမန် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ လွတ်လပ်ချင်တဲ့အတွက် အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်နေတာဖြစ်လို့ ၎င်းတို့စိတ်ကြိုက် နေထိုင် ပြုမှုဆက်ဆံလေ့ ရှိပါတယ်။ အတွေ့အကြုံရင့်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကတော့ ၎င်းတို့ ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် သင့်ဘက်ကဆက်သွယ်လာလျှင် အမြန်ဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ အဆင်သင့် ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ၎င်းတို့အနေနဲ့ အခက်အခဲတစ်စုံတရာ ရှိလာပါကလည်း သင်နဲ့ ပြန်လည် ညှိနှိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင် တစ်ယောက်ကို ငှားရမ်းတော့မယ် ဆိုလျှင် အရင်ဆုံး ဆက်သွယ်ရလွယ်မှု ရှိမရှိကို လေ့လာ သင့်ပါတယ်။ ဒါ့မှသာ မိမိရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိပရောဂျက် မစတင်ခင်မှာပဲ ဆက်သွယ်ရ ခက်ခဲနေတယ် ဆိုရင်တော့ သင့်အနေဖြင့် တခြား အလွတ်တန်းပညာကိုပဲ ပြောင်းလဲရွေးချယ်သင့်နေပါပြီ။
အထက်ပါ ဖော်ပြချက်များဟာ လက်တွေ့လောကမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော အချက်အလက်များကို အခြေခံပြီး ရေးသားထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သင့်အတွက် များစွာအထောက်ပြုလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ အတွေ့ကြုံရင့်တဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေဟာ ဘယ်တော့မှ ပုန်းကွယ်မနေတတ်ပါဘူး။ ၎င်းတို့ရဲ့ အရည်အချင်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိခြင်းတွေဟာ သင့်လုပ်ငန်းအတွက် များစွာအကျိုးစေမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ငှားရမ်းအသုံးပြုတော့မယ် ဆိုလျှင် သေချာအချိန်ယူပြီး ရွေးချယ်ဖို့ စကားလက်ဆောင် ပါးလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။ အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ရွေးချယ်ဖို့ အခက်ခဲရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်း “ချိတ်ဆက်” မှ သင့်ကိုယ်စား အရည်းအချင်းရှိတဲ့ အလွတ်တန်းပညာရှင်တွေကို ရှာဖွေပေးဖို့ အမြဲတမ်းအသင့်ရှိနေပါတယ်နော!
Contributed by Myat Min Lu @ Kaung Thit, ChateSat's Freelancer